Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » 90% amin'ireo orinasa madinidinika dia mety mikatona any Etazonia 10
orinasa kely kova 19
Ahoana ny fandoavana hofan-trano amin'ity volana ity amin'ny maha orinasa kely any Etazonia na Kanada? Ny zava-drehetra dia tsy lehibe intsony any Etazonia. Ny fanjakana amerikana 10 voadona mafy indrindra misy 90% amin'ireo orinasa kely eo amoron'ny fianjerana noho ny valanaretina Coronavirus dia taratry ny fiovaovana tamin'ity herinandro ity.
Ny fanjakana amerikana mampalahelo indrindra ho an'ny tompona orinasa kely dia:
Distrikan'i Columbia (94.7%)
Ireto misy valiny vitsivitsy avy amin'ny fanadihadiana nataon'ny alignable.
340K tompona orinasa kely hatramin'izao dia nandanja. Fandraisana anjara mahatalanjona, ndao hotohizantsika hatrany izany.
“Misy fiatraikany amin'ny fihenan'ny” niseho tamin'ny tabilaon'ny Impact Over Time! Manodidina ny 4% ny tompona orinasa kely ao Fanjakana 31 sy faritany 6 no nanao sonia an'io fironana io.
Ny fanjakana sy ny faritany hafa dia miakatra amin'ny làlana na mankany ambany: Fanjakana 40 sy ny Distrikan'i Columbia koa dia nitatitra ny fitomboan'ny fiatraikany amin'ny ankapobeny. Ary 10 ny fihenan'ny hantsana. Toy ny mitaingina tsofa mitsofa izany.
Mbola avo ny vokany amin'ny ankapobeny, mijanona manodidina ny 85%.
Fanavaozana ny fampindramam-bola ho an'ny karama - Tsara kokoa.
38.8% tsy nihatra
30.2% ampiharina, mbola tsy naheno
9.8% nanandrana nampihatra, tsy afaka mandefa
4.4% no nolavina
5.2% no nankatoavina, fa mbola tsy nahazo vola
11.6% ihany no nankatoavina ary manana vola (hatramin'ny 8%)
Tsy fahampiana vola, 34% amin'ireo orinasa madinidinika dia tsy afaka mandoa hofan-trano amin'ny Mey
Mbola misy fiatraikany 85%, saingy mandà ny laharana voalohany amin'ny sarintany!
Mihena ny tsindry any amin'ny fanjakana sasany, manandratra ny hafa
Ny fiakarana lehibe indrindra amin'ny fiatraikany dia hita tany Arkansas (niakatra 16%), Montana (niakatra 11.5%), DC (niakatra 10%), ary Idaho (niakatra 9/7%).
Mandritra izany fotoana izany, fanjakana maro no latsaka tamin'io filaharana Top 10 io, mampiseho ny fihenan'ny fanantenana misy fiantraikany:
I Alaska dia nitana ny laharana voalohany nandritra ny herinandro maro, nefa izao dia tsy ao anatin'ny Top 10, mitatitra ny fihenan'ny -15% mahery tamin'ny fiatraikany, niantsona tany amin'ny fanjakana 5 farany tamin'ity herinandro ity, miaraka amin'ny isa 80%.
Ny fanjakana hafa misy rotsakorana mampihetsi-po dia anisany ny Rhode Island (-16%) nidina hatramin'ny 75.9% & Delaware (-15%) nipetraka tamin'ny 76.9%.
Fanjakana manana fihenam-bidy antonony kokoa dia: New York (-3%) ankehitriny mihodina amin'ny 90%, Michigan (-3%) nidina hatramin'ny 89.1%, Vermont (-4%) ankehitriny dia 88.7%, ary Massachusetts (-5%) nidina amin'ny 87.8%.
Any Canada, ny faritany sasany dia maivana sy mihamazava
Manitoba, Saskatchewan & New Brunswick dia nisy fihenam-bidy lehibe, hatramin'ny -8.7% ka hatramin'ny -17%. Na i Ontario aza, izay laharana 1 tamin'ny 91% tamin'ny herinandro lasa, dia natsipy tany amin'ireo faritany 3 be mpijaly indrindra ary efa 86% izao.
Nova Scotia, indrisy, nitsambikina saika 100% amin'ireo orinasa voakasik'izany. Quebec dia mijanona ho avo amin'ny 88.2%, ary toy izany koa i Alberta amin'ny 87.05%.
Amerika Avaratra, mazava ho azy, tsy irery amin'ity tolona ity. Nivoaka ho an'ny orinasa kely i Japon, toy izany koa i Alemana.